Muxuu ka yiri tababare Solskjær guuldaradii ay xalay kala kulmeen kooxda Wolverhampton??? – Gool FM
Muxuu ka yiri tababare Solskjær guuldaradii ay xalay kala kulmeen kooxda Wolverhampton???
Dajiye April 3, 2019
(England) 03 Apriil 2019. Tababaraha reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu kaga xun yahay guuldaradii kooxdiisa Manchester United xalay ka soo gaartay dhigooda Wolverhampton, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa haatan 61 dhibcood la fadhida kaalinta 5-aad ee dhanka kala sareynta, halka kooxaha kala ah Tottenham, Arsenal iyo Chelsea aysan wali ciyaarin, waxayna fursad weyn u heystaan inay horey u sii socdaan isla markaana ay Red Devils dib ugu laabato booska 6-aad.
Hadaba tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay kala hadlay warbaahinta sida uu kaga xun yahay guuldarada kasoo gaartay kooxda Wolverhampton.
“Waxay ahayd mid ka mid ah maalmaha aan bixinay wax walba si aan gool u dhalino seddex jeer, laakiin ugu dambeyntii waan ku guuldareysanay inaan sidaas sameyno”.
“Waxaan ciyaarnay kulan halis ah, laakiin kooxda Wolverhampton ayaa awooday inay si fiican kaga faa’iidaysato khaladaadaheena”.
“Waxaa naga dhashay 2 gool, kadib qaladaad aad u xun ee inaga dhacay, waxaana ka mid ah dayacaadii aan sameenay”.
“Weli waxaan heysanaa 6 kulan si aan u helno 15 dhibcood, isla markaana aan kaga mid noqono 4-ta kooxood ee ugu sareysa, waa inaan iska iloownaa kulankan, ee aan sugnaa waxa soo socda oo kaliya, waxaan soo bandhignay qaab ciyaareed aad u fiican inkastoo aan guuldareysanay”.
Real Madrid oo soo bandhigtay qiimaha ay kaga iibineyso Varane kooxaha xiiseenaya ay ka mid tahay Juventus
Valverde oo ka hadlay kulankii waalida ahaa ay xalay ku wada ciyaareen kooxda Villarreal, horyaalka La Liga